Indawo yabakhenkethi "Ivenkile yeentsimbi" - I-Airbnb
Indawo yabakhenkethi "Ivenkile yeentsimbi"
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaurizio
Emazantsi elali yamandulo yaseContigliano, indlu entsha ezimeleyo (yalungiswa ukusuka kwivenkile endala yeengcibi zentsimbi), enegadi. P. Terra: igumbi lokuhlala-ikhitshi-igumbi lokuhlambela; P.1 ° igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye nebhedi yebhedi kunye negumbi lokuhlambela. KwiCamminio di Francesco, i-10 'min ukusuka eGreccio, eRieti, 35 Terminillo, 30 Terni, 80 km eRoma. kwindawo bar, restaurant, supermarket, swimming pool, cycle path, Franciscan sarturies, Laghi L. Lungo and Ripasottile nature reserve, Marmore waterfall, Piediluco lake.
Phakathi kweentaba zeSabine ezinemithi kunye neendawo ezisemaphandleni eziluhlaza kwithafa leReatina eliwela indlela yebhayisikili ye-panoramic, kunye nendlela ye-S. Francesco, kwindawo egcwele iindlela zokuhamba zendalo kunye neendlela zokuhamba ngeebhayisikili zeentaba, ezifanelekileyo kuyo nayiphi na indawo yokuzonwabisa yangaphandle kunye umsebenzi wezemidlalo.
Ilali entle yamaxesha aphakathi eContigliano Alta ejikelezwe ziinkuni ezahlukeneyo zeentaba zeSabine kunye nethafa eliluhlaza laseRieti. Igama lithatyathwe kwi-"fundus okanye i-Locus Quintilianus", echazwe ngo-1157 njengeCasrum Quintilianum nanamhlanje etyebile kwiindlela kunye nembali kunye nobukho bobugcisa. Kwidolophu esezantsi kukho imivalo, iindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, iibhanki, iposi, ichibi lokuqubha laseKartodromo, iS Pastore abbey kwaye kumgama omfutshane iGreccio kunye neNdalo yoLondolozo lweNdalo yeLake, iPiediluco Lake kunye neMarmore Falls. I-Terminillo ibonakala ngokucacileyo
Sono un appassionato di ambienti e sport in natura nonchè di montagna...con esperienza pluriennale di accompagntore escursionistico praticante scialpinismo alpinismo e mountanbike nelle zone che circondano la vallata Reatina ("Valle Santa") disponibile ad ogni suporto per gli amanti della natura e dei paesaggi dei nostri luoghi.
Sono un appassionato di ambienti e sport in natura nonchè di montagna...con esperienza pluriennale di accompagntore escursionistico praticante scialpinismo alpinismo e mountanbik…
Inkxaso yokuqonda kwendawo kwii-degrees ze-360, kunye neminyaka emininzi yamava kwi-Italian Alpine Club, ekhoyo ukusebenzisana ukulungiselela iindlela zokuhamba kunye nenkxaso enokwenzeka yokulungiselela, ukufumaneka kokuphumelela kwamava.
Umnini-hlathi we-agronomist onamava eminyaka emininzi kwi-Alpine Club eziqhelanisa nokunyuka intaba, ukutyibilika intaba kunye nokukhwela ibhayisekile entabeni, uya kusebenzisana nawe ukukwazisa ubuhle bendalo bendawo yethu kunye nempumelelo yamava akho.
Inkxaso yokuqonda kwendawo kwii-degrees ze-360, kunye neminyaka emininzi yamava kwi-Italian Alpine Club, ekhoyo ukusebenzisana ukulungiselela iindlela zokuhamba kunye nenkxaso enok…